1. Pancakes n'ezie dị mfe ịme. Naanị ihe ole na ole Ma ọ chọghị akụrụngwa pụrụ iche dịka Beater ma ọ bụ oven kwa Ihe niile ị chọrọ bụ otu enamel pan zuru. Taa, anyị nwere ụzọ esi eme pancakes. Mfe site na onwe gị ịhapụ ibe gị. Nwere ike ịnwale nke a n'ụlọ.
2. Akụrụngwa maka Pancakes 1. Ntụ ọka wit 2. Sugar (akwadoro ka aja aja) 3. Ime achịcha 4. Butter or oil 5. Vanilla powder 6. Akwa 7. Mmiri ara ehi ohuru 8. Nri achọrọ dị ka chocolate, jam jam, mmanụ a honeyụ, kuki, mkpụrụ osisi ọhụrụ, wdg.
3. Gwakọta ihe ndị bụ isi, gụnyere ntụ ọka wheat, ladles 2-3, àkwá 1, nkpuru abụọ nke mmiri ara ehi ọhụrụ, shuga, dabere na ụtọ achọrọ. Mgbe ahụ, ka ndị mmadụ mix juputara. Ọ bụrụ na ịnweghị onye na-eti eti, nke ahụ dị mma. Enwere ike iji ya dị ka ogwe osisi kama
4. Na-esote, tinye ụfọdụ n'ime ihe ndị a, ma ọ bụrụ na ọ dị: sachet nke vanilla ntụ ntụ maka obere ekpomeekpo na isi, yana obere ntụ ntụ, ihe dịka ọkara ngaji, naanị iji belata pancake. Ma kpachara anya ma tinyekwala ntụ ịme achịcha gabigara ókè, n’ihi na nke a ga - eme ka pancake jupụta oke.
5. Gbanye gas, dozie pan na obere ọkụ. Tinye ihe dị ka ngaji mmanụ 1 ma ọ bụ butter ma gbasaa butter na ladle ruo mgbe pan ahụ dum.
6. Mgbe bọta ahụ gbazee, jiri ladle ma ọ bụ ladle jiri scoop pịkụl achicha anyị kwadebere wee wụsara ya na pan ahụ gburugburu mgbe ọ ga - enweta mkpụrụ 3-4 site na ngwakọta nke ntụ ọka a kwadebere na mbụ, ọ ga - apụta ihe dịka 6. -8 iberibe, njikere ije ozi banyere 2
7. Mgbe esi nri n'akụkụ nke ọzọ nke ọma, ị nwere ike ịtụgharị nke ọzọ. Kpachara anya ka ị ghara iji ọkụ siri ike. Gbalia ịtọ pan Ọkụ na-eziga okpomọkụ ọbụna na pan. A ga-esi nri pancakes n'otu oge.
8. Tinye na efere ma jiri ihe ịchọ mma ọ bụla ịchọrọ, ma ọ bụ chọkọleti, mkpụrụ jam, mmanụ a ,ụ, kuki, mkpụrụ osisi ọhụrụ, wdg. Butdị Buttered dị ụtọ!
9. Kedu ka ị mere? Usoro nke ịme pancakes dị mfe karịa atụ anya, nri? Ugbu a, ịkwesighi idozi kọfị ahụ n'ihi Enwere m ike ime ya n'onwe m. Nwere ike ịgbakwunye ọtụtụ ihe ị chọrọ. Nye ya anwale, ị ga-ejikọkwa gị. Mmalite nwere ike ịdị obere nwayọ, mana ọ bụrụ n’ịgbalịa ịdị na-eme ya oge ụfọdụ Ga-aghọ onye na-aga were were n'ọnụ Ruo otu ụbọchị, ị ga-amata uzommeputa nke masịrị gị nke ịchọrọ Gịnị Efrata na ole ga-etinye Belata ụtọ dị ka ị na-amasị. Uru nke pancakes abụghị naanị ihe dị mfe ịme. N'agbanyeghị ụtọ ọhụrụ Na toppings kwa Ihe kachasị amasị anyị bụ unere na Nutella, yabụ gịnị ka ị na-anwale na gịnị ka ị na-erikarị pancakes kachasị?